05 June – Maalinta caalamiga ah ee degaanka | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 05 June – Maalinta caalamiga ah ee degaanka
Posted by: Ahmed Haaddi June 5, 2022
Himilo — Muddo aan u fog, waxaan qodaynay godkii lagu xabaali lahaa nolosha degaanka; kheyraad walba oo ku dihan iyo baxaali quruxsanaanteeda waxaa lagu waday dhac iyo wax-yeelo joogto ah; mana jirto mas’uuliyad umadeed oo la iska saaray si wadajir in loo ilaaliyo dabeecadda degaanka. Saddexdii ilbiriqsi ee kasta, waxaa dunida ka luma keyn muggeedu la eg yahay garoon kubadda cagta ah lagu dheelo; qarniyadii lasoo dhaafayna, waxaynu burburinay kala-bar dhulka midkiisa qoyan badaha iyo webiyada. Kala-bar sidoo kale, hoyga iyo calafka ay noolaha ku jira badaha sida kalluunka cuni jireen ayaa baaba’aya; halka laga cabsi qabo in marka la gaaro 2050-ka, badda wixii ku jira oo noolayaal ah ay waayi doonaan waxay quutaan.
Cimilada sii xumaanaysa ee dunida waxay sare u dhigaysaa heerkulka dabeecadda degaanka. Hoos-u-dhaca ku socda hab-nololeedka bey’ada waxaa u sabab ah si xun u adeegsiga iyo ku takrifalka kheyraadka ku jira ama saaran arlada sida dhirta. Is-beddelka cimiladuna wuxuu noqonayaa dhibaato si xowli ah isu soo taraysa.
Si kastaba, qaadashada tusaalayaasha nool iyo sawiradda hadlaya ee degaanka, Maalinta Caalamiga ah ee Degaanka waxay diiradda saaraysaa soo-celinta iyo dib-ugu-howlgelidda hab-nololeedka degaanka. Hal-ku-dhegga sannadkan ayaana loo qaatay ‘Dhul keliya.’
Soo celinta baxaaliga iyo dabeecadda degaanka waxay ka dhigan tahay kahor-tagga iyo joojinta ficillada ka dhanka ah burburinteeda iyo wax-yeellada ku socda. In laga fogaado dhaca lagu hayo loona kala dheereeyo bogsiinteeda.
Maalinta Caalamiga ah ee Degaanka waxay ka anba-qaadaysaa Ol’olaha Gu’yaalaha is-daba-jooga ee lagu soo celinayo hab nololeedka degaanka oo ka bilaabanaya 2021-2030. Howlgalka caalamiga ah ee dib loogu nooleynayo balaayiin hectar oo duur ilaa aseendooyin u dhaxeeya; iyo beerista iyo dhireynta dusha sare ee buuraha iyo gunta hoose ee badaha.
Kaliya hab-nololeed degaan oo bedqaba ayaa lagu hubsan karaa nolosha iyo hagaajinta cimilada iyo in la joojiyo dheelliga ku jirta isku-dul-noolaanshiyaha noolaha.
Xuska maalintan oo sannadkan uu marti-gelinayo Dalka Pakistan waxaa dunida loogu yeerayaa tallaab degdeg ah inay u qaadaan samata-bixinta hab-nololeedka dhaawacan ee degaanka.
Ol’olaha dib usoo celinta hab nololeedka waxaa baaq caalami ah iyo howl gudo ballaaran oo ka wada dhaxaysa quruumaha. Waxa la bogaadinayaa lana qorsheynayaa in dhul dhan – isku darka dhul ahaaneed ee Maraykanka iyo Shiinaha – in lagu beero dhir si loo helo hawo macaan iyo biyo nadiif ah; shaqooyin iyo cunno.
Waxaa barbarsoconaya ol’olaha howlgal maalinle ah oo umadaha iyo shaqsiyaadka caadiga ah loogu yeerayo inay door muuqda ku yeeshaan dhireynta iyo joogteynta ficillada bili kara quruxda iyo baxaaliga degaanka.
Previous: Jose Mourinho oo ku biiraya PSG
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 205aad